ECONOMY – Zimbabwe Online News
More currencies won’t revive economy
THE addition of several currencies, to those already in use by the RBZ last week, though welcome, will not do much to alleviate the economic crisis the country is facing.
The post More currencies won’t revive economy appeared first on The Zimbabwe Independent.
February 7, 2014 Web Desk Industry No Comment
Experts predict decline in Zim’s inflation rate
ECONOMIC experts have predicted a further decline in Zimbabwe’s inflation rate as the country’s economy slows down.
The post Experts predict decline in Zim’s inflation rate appeared first on The Zimbabwe Independent.
Economy: Zim’s post-poll priority
DESPITE whoever wins the next elections in Zimbabwe, one of the glaring challenges to be immediately addressed is the country’s economic diplomacy.
The post Economy: Zim’s post-poll priority appeared first on The Zimbabwe Independent.
May 30, 2013 Web Desk News No Comment